သူကြီးသေသင့် မသေသင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သူကြီးသေသင့် မသေသင့်
Posted by Novy on May 16, 2014 in Creative Writing, Short Story | 42 comments
မီမီရဲ့ ရှက်တတ်ရင် သေလို့ရတယ် @kai ဆိုတဲ့ပိုစ်ကို ဖတ်ပြီး
ရှက်တယ် မရှက်ဘူးဆိုတာကတော့ ခံယူသူရဲ့ စိတ်နဲ့ဘဲသက်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်
ကိုယ့်အတွက်ကဒီကိစ္စကရှက်စရာလိုယူဆရပေမဲ့ တစ်ခြားသူအတွက်ကတော့ ရှက်စရာဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ စကားကိုအားပေးချင်းမဟုတ်ပါ
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ “ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့”
ခရက်တစ် တူ San Hla Gyi (သဂျီးခိုင် မှားသလား။ မှားတာပေါ့ အကြီးအကျယ်ကို ခဏ ခဏ မှားတယ်။ အားလုံး ညာဘက် ကော်လံဒေါင့်က စည်းကမ်းချက် နံပါတ် ၆ ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ “လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အသားအရောင် ခွဲခြားမုန်းတီးမှု ဖြစ်စေသော စာများ မတင်ရ” တဲ့။ ကဲ ဆက်ကြည့်ရအောင်။
နာနာ(သံတွဲ) ဆိုသူ ရေးတဲ့ မြန်မာ မွတ်စလင် ပြည်သူများအား မုန်းတီးသူများသို့ ဆိုတဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ သဂျီးက ဒီလို ပြောတယ်။)
ဘလာ ဘလာတွေရှိသေးမှာပေါ့ ……………………………………………………………
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူထောင်ထားတဲ့ ဆိုက်ပေါ်မှာ စာတွေရေးလို့ရတယ်
ဗဟုသုတတွေမျှဝေလို့ရတယ်/ ပေါက်ကွဲနေရင်/ ကြေကွဲနေရင် ကဗျာတွေရေးလို့ရတယ်/စာတွေရေးလို့ရတယ်
ပေါက်ကွဲအားကောင်းလို့ အများသူငါ ဖတ်ရွေးကသဘောကျရင် ဆုတွေဘာတွေတောင်ရသေး
ဒီထက်ကောင်းရင် သူကြီးကသတင်းစာမှာဖေါ်ပြပြီး စာမူခတောင်ပေးသေးတယ်လေ
ဒါကတော့ မနိုရဲ့ အမြင်လေးပါ
အနော်တို့တွေကို စာမူခတွေ ထုတ်ပေးရဦးမှာ
ဟုတ်ရယ် အနော်ယဲ ပက်ပက်စက်စက် ထောက်ခံပါရယ်
ကျုပ်သေရင်.. အကြွေးတွေ ဘယ်သူအမွေယူမလဲဟေ့…။
အဲ့လို အမွေတော့ မနိုလဲပေးချင်သား
လေယဉ်လက်မှတ် .. ဗီဇာနှင့် ဟိုတယ် ၀န်ဆောင်မှုအလကား…
မသေသင့်သေးဘူး.. အနော် တူ့ကို မဆဲရတေးဝူး.. အဟိ..
ဆန္ဒမဲပေးရမယ့် စနစ်ပေါ်မူတည်ပြီး အဖြေပြောင်းလဲနိုင်တာမို့
လျှို့ဝှက်မဲကတော့ ဖွဘွတ်ရဲ့ ချက်ဘောက်မှာ ပေးလို့ရပါတယ်
ကျုပ်ကတော့ သူကြီးကို သေစေချင်တယ်ဗျ…
သူသေသွားရင် ဒီဆိုဒ်ကြီးလဲ ကျန်တော့မှာမဟုတ်သလို…
ဆိုဒ်ထဲမှာ ဘာမှရေးစရာမလိုတော့ဘူး… ရှိလက်စ သံယောဇဉ်လေးလဲပြတ်…
ပိုစ့်ခေါင်းစဉ်ကို အခုကတည်းက ကြိုပေးထားမယ်…
လွမ်းလို့ကျန်ရစ်မှာကို အားနာပါတယ်… ခိုင်…
ပြဿနာရဲ့ အစကပြန်​ကြည့်​ရ​အောင်​ ကျုပ်​သိသ​လောက်​က​တော့ ပို့စ်​တစ်​ခုမှာသူကြီးက ” ကိုယ့်​ဖာသာအထင်​ကြီး​နေတတတ်​တဲ့ မြန်​မာ​တွေ နွား​ခြေရာခွက်​ထဲက မထွက်​ဖူးတဲ့ ဗမာ​တွေ ကိုယ်​ဖာသာကို အဖ
ထင်​ကြီးမ​နေနဲ့ မျက်​​စေ့​လေးဖွင့်​ပြီး နား​လေး စွင့်​ကြည့်​အုံးလို့ အဓိပ္ပာယ်​ရတဲ့ ကဗျာတစ်​ပုဒ်​နဲ့ ​ကော်​မန့်​သွား​ရေးတယ်​ ။ အဲ့ကဗျာ ပြန်​ဖတ်​ကြည့်​ ။ အ​ပေါ်က​ပြေခဲ့သလိုပဲ အဓိပ္ပာယ်​ပြန်​လို့ရတယ်​ ။ ဒါကို အဓိပ္ပာယ်​​ကောက်​လွဲပီး သူကြီးနာမယ်​တပ်​​ဆော်​ခံထိတယ်​ ။ သွားစတာက သူကြီး ။ သူနဲ့ တန်းတူ ထားပီး သွား​ရေးတာ ။ တစ်​ကယ်​​တော့ သူနဲ့ ၀မ်းစာ ပြည့်​ပုံချင်းမညီ​တော့ အကျ အန ​ကောက်​ပီး ပြန်​တွယ်​လိုက်​တာ ။ အဲ့ဒါကို စတစ်​ကီ ​ပေးထား​တော့ အုတ်​​အော်​​သောင်းနင်းဖြစ်​သွားတာ ။ နိုင်​ငံခြားသွားတဲ့သူတိုင်း တူညီတဲ့ အ​ခြေအ​နေတစ်​ခုထဲနဲ့သွားကြတာမဟုတ်​ဘူး ။ မသွားလို့မဖြစ်​လို့ တိမ်းရင်း​ရှောင်​ရင်းနဲ့ ​ရောက်​သွားတာရှိတယ်​ ။ ပညာအတွက်​ လွတ်​လပ်​မှုအတွက်​ အသက်​​ဘေး အတွက်​ မထွက်​မဖြစ်​လို့ ထွက်​ရတာရှိတယ်​ ။ ​နောက်​ဆုံးတစ်​မျိုးက ​ကြွေးတင်​လို့ ကျွန်​ထွက်​ခံတာရှိတယ်​ ။ သူကြီးကို ​သေသင့်​တယ်​ လို့​ပြောတဲ့သူက နိုင်​ငံခြားထွက်​သွားတဲ့ အမျိုးအစား ဘယ်​နှစ်​မျိုးနဲ့ ရင်းနှီးဖူးလဲ ။ နီးစပ်​ဖူးလဲ ပြန်​ကြည့်​ရမယ်​ ။ သူက နိုင်​ငံခြားသွားတဲ့သူအားလုံးကို အမျိုးအစား တစ်​တန်းတစ်​စားထဲ သတ်​မှတ်​ထားပုံရတယ်​ ။ အဲ့​တော့ မသိနားမလည်​သူရဲ့စကားကို အတည်​အတန့်​ ​ဆွေး​နွေး​နေဖို့မလိုပါဘူး ။ သူကြီးအ​နေနဲ့ ရှက်​ဖို့မလိုသလို ​သေဖို့ လဲ မလိုပါဘူး ။ မသိလို့ ​ပြောတာပဲ ။ သိ​အောင်​ပြန်​​ဆွေး​နွေး​ပေး ​ပေါ့ ။
အကို naywoon ni ရေ ကျွန်တော်ရင်ထဲက စကားကို ပြောသွားတဲ့အတွက် ကြိုက်တယ်လို့ပဲ ပြောပရစေ။ တကယ်တော့ ရေမြေခြားမှာ လုပ်နေရသူတွေရဲ့ ဘဝတိုင်းက တချို့တွေ့ထင်နေသလို အရမ်းမချိုပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်လဲ လူမျိုးခြားတော်တော်များများနဲ့ အလုပ်လုပ် ဘူးပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုး လောက် ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်တာ မရှိဘူးထင်တယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီ မှာ ဂရုဏာ ဒေါသနဲ့ သူများ နိုင်ငံတွေ ဖြစ်သလို မဖြစ်ရကောင်းလား ဆိုပြီး ဟိုမရှက်တက်တဲ့ သူကြီးတွေကြားအောင် ဝေဖန်နေကြတာပါ။ ဒီလူတွေသာ တကယ်တကိုယ်ကောင်းစံတဲ့ သူတွေဆို ဒီမှာလာပြီး ကိုယ့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ဖြုန်းနေစရာတောင် အကြောင်းမရှိပါ ဘူးဗျာ။
ဟောဒီ … မောင် ကလည်း …
ယောက်ခမ အလိုတော်ကျပါပဲရယ် ….
ကိုကိုလာမယ် ဆို ……….. လို့…………………
သများကတော့ တဂျီး ထက် နိုနို အတွက် ကိုကိုပါလာမဲ့ လက်ဆောင်တွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။
ဟိုဘက်က ကျနော့် အလွဲတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဆွဲရရင်
ကျနော် ငယ်က စာဖတ်တော့ သတင်းစာတွေမယ်.. နာရေးဆက်စပ် ကျေးဇူးတင်လွှာတွေ
(ဘယ်သူဘယ်ဝါ မမာစဉ်က အစွမ်းကုန် ကုသပေးခဲ့ကြသော ..ဘလားဘလား ဘလား ..)
ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာတွေလေ…။
တကယ်က အဲ့လာ ..ကျန်ရစ်သူမိသားစုက ထည့်တာဗျ..
ကျနော်က ငယ်သေးတော့.. မသိဘူး.. ပီး ..လက်ထရယ်သင့်ကင်း ရွာသားအလောင်းလျာပေပဲဟာ
သည်လို တွေးမိပါသတဲ့..အော်.. ရှောသွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် .. တယ်လဲ လူမုန်းများသကိုး ..။
ကျန်း.. သူ့ကို သေအောင်ကုပေးလိုက် သူတွေကို သူ့ကို အမြင်ကပ်သူတွေက ကျေးကျေးပါ ၀ိုင်းထည့်ကြတယ် ဆိုပြီး..
ဟီဟိ…။ အကောင်ကြီးကြီး အမြီး ရှည်ရှည် သေလေလေ .. ၀မ်းနည်းကြေကွဲခြင်း နဲ့အပြိုင် အဲ့သည့် ကျေးဇူးတင်လွှာတွေ က
များတတ်တာကိုး ..ကျုပ်ကတော့ ..ကျေးဇူးတင်လွှာ များများ ထည့်လေ..အဲ့လူ အတော် လူမုန်းများတာပဲ ကျန်း…
ဆိုပြီး အမှတ်ထားခဲ့တာကိုးဗျ…။(နောင် တော်တော်ကြာမှ လူကြီးသူမ တယောက်ပြင်ပေးလို့ အမှန်ကို သိတော့တာ..)
ဟီဟိ…ဆိုတော့ ငယ်ကအလွဲအတိုင်း စဉ်းစားကြည့်မိတော့ ..အစမ်းသေခိုင်းလို့မရတာ နာသဗျာ ..ရရင် ခနသေကျိပါ့လား ဟင်င်င်
၀မ်းနည်းကြေကွဲခြင်း နဲ့ ကျေးဇူးတင်လွှာ ..ထိုင် ကောင့် လုပ်ကြည့်ချင်လို့ဗါ…။
အစမ်းသာသေလို့ရရင်.. ငရဲရောက်အောင်သွားပြီး.. ငရဲမီးကို လူ့ပြည်မှောင်ခိုချတာရယ်…။
သင်သွားလိုရာသွားနိုင်ပြီ ဆိုသောအမိန့်ပြန်တမ်းကို သဂျီးကဘဲဖတ်မလား သဂျီးကိုဘဲဖတ်ရမလား တကယ်တော့ သေချာသိကို မသိသေးတာပါ။
အဲဒီတော့ ဘော်ဒါအပေါင်းတို့ နေမြဲ။
သဂျီးကိုတော့ မ သေခိုင်းကြပါနဲ့ အူး
များရွာထဲ လည် ချင် သေးတယ် ဟင့်ဟင့်:cry:
သဂျီး မ မ မ သေသင့်ဘူးးးးးးး
သူကြီး​သေသင့်​ မ​သေသင့်​ ပြဿနာထက်​ မူရင်းနဲ့ မူပွား ကဗျာ ကိစ္စ အရင်​ရှင်းဦး ။ မူရင်းကဗျာ​ရေးတဲ့သူက မူပွားကဗျာကိုသွား ​တွေ့ရင်​ ဘယ်​​လောက်​​ပေါက်​ကွဲသွားနိုင်​လဲ ကိုယ်​ချင်းစာကြည့့် ကျဦး ။ ​တော်​ရုံကိစ္စ မဟုတ်​ဘူး​နော်​ ။ ဦး​နှောက်​​ဖောက်​စားခံရတာ ။ ကျုပ်​က ကဗျာသမားချင်း ကိုယ်​ချင်း ကိုယ်​ချင်းစာကြည့်​တာ ။
ကျုပ်တို့လည်း အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး ပို့စ်တွေ ဖတ်နေစရာမလိုတော့ဘူး။
တွေ့ဆုံပွဲတွေ လုပ်နေစရာလည်း မလိုတော့ဘူး။
သိပ် ပူ စ ရာ မ လို ပါ ဘူး ..
အချိန်တန် သေမှာဘဲကိုး …….. :ha:
လောဆယ်တော့ တဂျီးမတေနဲ့ အကြွေးမရသေး ရို့ အကြွေးရရင်တော့ သေပါစေချစ်လို့….,
သဗ်ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ ထားလိုက်ပါဗျာ…
အစမ်း / ခဏသေစေချင်သူ —–
သေခြင်း မသေခြင်းထက်​ မူရင်းနဲ့ မူပွား ဖြေရှင်းစေချင်သူ——
အမိန့်ပြန်တမ်းကို ဘယ်သူအရင်ဖတ်မလဲ သိချင်သူ—–
သေလျင် အကြွေး အမွေပေးချင်သူ——–
အမျိုး အစားအစုံပါဘဲ စာရင်းမပိတ်သေးဘူးနော်
ပွိုင့်ကြေးတွေ ဒဂျီးအစားပေးမဲ့ သူရှိရင် သေလိုက် ဒဂျီး
ဒဂျီးတေသင့်တယ်.. သူတေမှ သာမီးဒေါ်လေးဂိုရမှာ.. ဒါပေမဲ့ အခုငယ်သေးဒယ်.. မတေနဲ့ဦး…
အမ်တီနိုဗွီလဲ အဲလိုဗဲ… တေတော့တေ ဒါဗေမဲ့ ဃုဟုပ်သေးဗူး..
မှက်ချက်။ ဂျူ နိုလေးဂို ခြစ်သယ်…။
သူကြီးက လူ ပဲ ကွယ်…။
တစ်နေ့နေ့တော့ မလွဲမသွေ သေရမှာပဲပေါ့…။
သေသင့်တယ် ထင်လည်း သေရမှာပဲ…။
သူ့ဟာသူ အချိန်တန်ရင် သေမယ့်လူတစ်ယောက်ကို…
အခု ဘဲ အပေါ်မှာ ရင်ဖွင့် လာတာ။
သူ့ဟာသူ သေသေ မသေသေ။
ဒီ ရွာလေး ရှင်နေဖို့ ဘဲအရေးကြီးတယ်။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ တေးမြုံငှက် လို အာဂတွင်း ထဲ ငုံ မထားနိုင် ရင်ဖွင့်လိုက်ချင်တာမို့ ဟစ်တိုင် ကောင်းကောင်း လေး လိုတာ။
ဒီအတွက် ဒီ ရွာလေး ရှင်နေရမှာ။
ဒီရွာ လေး ရှင် နေဖို့ အဲ့ လူကြီး ကိုလဲ ရှင် ပေး နေရတော့မှာ။
အမှန်ပြောရရင် ဒီရွာ ဒီလို ရှင်နေတာ ဒီ သူကြီး ကြောင့်ချည်းဘဲ မဟုတ်တာ မို့ တို့ ရွာသားများ အားလုံး လဲ ရှင် နေရမှာ။
ကို လတ် ကြီး ပျံ လာဘီ။
ကို ပေါက် မှ နုတ် ခွန်း ဆက် သ ပါ အိ။
ကဲ ပိုစ်လေး ကို မန်း မယ်
ဒီ ပိုစ်လေး ဖတ် လိုက် တော့ ဟိုး အရင်း က အကြောင်းလေး တစ် ခု သွား သ တိ ရ တယ်။
မန်းေ လး က မ စုိး ရိမ် ရုပ် ရှင် ရုံ နား မှာ စက် ဘီး အပ် လက် ခံ တဲ့ သူ တစ် ယောက် ရှိ တယ်။
သူ က စ က်ဘီး အပ် လက် ခံ ရင် ” အပျင်း ပြေ အပျင်း ပြေ ” လို့ အော် လေ့ ရှိ တာ။
ဒဂျီးတေလို့မဖစ်တေးဝူး။ ဆုယူဖို့ကျန်တေးတယ်။ နောက်ဒဂျီးဆီကလဲ တသိန်းရဖူးချင်တေးတယ်။
အဲဒါကြောင့်ခက်တာပေါ့ သေတယ်မသေဘူးဆိုတာ တကယ်မှမဟုတ်တာ ။ဆွေးနွေးအလားကားပဲ၊ ဆွေးနွေးရမှာက ဘယ်သူ မှားတယ်၊မှန်တယ်။ ဘယ်သူလွန်တယ် မလွန်ဘူးဆိုပြီးဆွေးနွေးမှာ။ ဖတ်ရတာတော့စိတ်မချမ်းသာပါဘူးဗျာ။ ပြောတာတော့ ဒီမိုကရေ။ လစ်ဘရယ်စံနုံး ။ ကိုယ်ထုတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းကို ကိုယ်တောင်မလိုက်နာတဲ့သူ( ရေးထားတာနော်)ကို မကောင်းဘူးလို့ပြောထားပြီး ဒီလူဆီ က ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရနေတော့ ကောင်းတယ်တဲ့။ ဘာလဲဗျ ။ခင်ဗျားတို့လဲ ဒို့တိုင်းပြည်က ဟိုလူတွေနဲ့ သိပ်မကွာပါလား။ ဘယ်မှာလဲ အမှန်တရား။ ဘာလဲဗျ သူကြီး ဟိုရှေးတုန်းက ရွာတွေမှာ သူကြီးက အာဏာအရှိဆုံး။ သူဘာပဲလုပ် လုပ်ရွာသူရွာသားတွေက ကြောက်ရတာတဲ့။ အခုလဲ အဲအချိူးပဲ။ ခင်ဗျားတို့ စာလေးရေးနေရတိုင်း သူမဟုတ်တာလုပ်တာ သူကြီးမို့လို့ ၀ိုင်း သက်ညှာနေကြတာလား။ မှားရင်မှားတယ် မပြောရဲကြဘူးလား။ အမှန်တရားအတွက် အဲလောက်တောင်မရင်းရဲတာ ဒီကလူတွေနဲ့ အထူးပါဘူး အတူတူပဲ။ ပြောတော့ မြန်မာတွေ အမြင်မကျယ်ဘူး။ နွားခြေရာခွက်ထဲနေသလေးဘာလေးနဲ့ ။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ရော ဘာထူးလဲ ။ ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲပါပဲ။ ခင်းဗျားတို့က ကိုယ်ဟာကိုကြတော့ ဟာသ လိုလိုဘာလို လုပ်လိုက်ကြတယ်။ ကိုယ်ဟာကို နဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားကြဦး။
စည်းကမ်းကို.. ထုတ်ထားတာ.. အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်..။
အဲဒါနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ ပို့စ်တွေ.. ဟုတ်မဟုတ်.. စိစစ်ရာမှာလည်း.. အခြေအနေကောင်းနဲ့.. အသိ..ပြောရရင်အယ်ဒီတာ့ညဉ်ကောင်းလေးတွေလိုပါတယ်..
အဲဒါတွေနဲ့ပါတ်သက်ရင်… ဥပဒေအရများပြာစွာပြဌာန်းထားပြီး.. တော်တော့်ကို အထိမခံတဲ့နိုင်ငံ..
အဲဒီကြားထဲ..မီဒီယာလွတ်လပ်မှု.. လွတ်လပ်စွာပြောဆိုစည်းရုံးနိုင်မှုဆိုတာကိုလည်း.. အခြေခံဥပဒေအရ ထောက်ခံအားပေးတဲ့နိုင်ငံ..
ကြိုးတန်းပေါ်လျှောက်… ဘယ်ဟာကဘယ်လိုဆိုတာ… ဆုံးဖြတ်ရေး.. သူများစာကို.. (အခမဲ့) စိစစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါကြောင်း..။ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာ.. မှားတယ်..မှန်တယ်လည်း.. တာဝန်ယူထားပါကြောင်း..
တကယ်လို့.. ကျုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှားတယ်ထင်ရင်.. အချက်အလက်နဲ့ထောက်ပြနိုင်ပါကြောင်း..။ ဆဲနိုင်.. သေခိုင်းနိုင်.. အဲ.. ရှင်ခိုင်းနိုင်ပါကြောင်း..
( လက်တွေ့.. သေနတ်နဲ့လာမပစ်.. ပြီးတာပဲ.. )
တလောက.. ရန်ကုန်မှာ..Hate speech နဲ့ပါတ်သက်ပြီး.. ယူကေပါမောက္ခက.. ဟောပြောပွဲလုပ်ပေးတယ်..။
အဲဒါကို အစိုးရညွှန်ချုပ်ကအပိတ်မှာ.. ဥပဒေပြုဖို့မရှိကြောင်းပြောပိတ်လိုက်တယ်… သတင်းထဲဖတ်ရတယ်..။
မြန်မာတွေ.. ပြည်ထောင်စုအဖြစ်ဆက်သွားရေးမှာ.. အသက်လောက်အရေးကြီးနေတဲ့… Hate speech နဲ့.. Discrimination နဲ့.. Human Rights အဓိပ္ပါယ်ကောက်.. လေလုံးမကွဲသေးလို့.. ထင်ပါကြောင်း..။
.. နိုင်ငံတိုင်းဒီလမ်းဒီလိုလျှောက်ကြရတာမို့.. ဒါကဒီလိုတွေထဲ.. မုဆိုးစိုင်သင်သွားမယ်.. ထင်ပါကြောင်း…။
Discussion on ‘Hate Speech’ held in Yangon
Yangon, 24 April
Discussions on Hate Speech were held at the Sky Star Hotel in Yangon on Thursday in an event jointly organized by the Ministry of Information and the Friedrich Ebert Foundation. Director-General U Ye Tint of the Information and Public Relations Department under the Ministry of Information delivered the opening speech at the occasion. Senior Lecturer Dr. Venkatlyer, media law consultant of FES, clarified international laws, definitions and possible difficulties regarding the term ‘hate speech’. Dr. Venkatlyer also answered questions.
The discussion was attended by officials from the Ministry of Information, as well as the members of the Myanmar Writers’ Association, the Myanmar Publishers and Distributors Association, the Myanmar Printers and Publishers Association, the Myanmar Press Council (Interim), the Myanmar Journalists Union, the Myanmar Journalist Network, and people from the National Management College, Journalism Course, UNESCO, FES and the news media.
The Bonn-based foundation was established in 1925 as the political legacy of Friedrich Ebert, Germany’s first democratically elected president. It is the largest and oldest of the German party-associated foundations.
ဦးကိုကို တစ်ယောက် ဒီ ရွာ ရဲ့ စာ မကျေ ဘဲ နဲ့ စာဝင်ရွတ် နေတာ သေချာပြီ။ :-))))
ရွာ (မြို့ လို့ ကို ပြောင်းမခေါ်ချင်အောင် ရွာလေးကို ချစ်လို့ ပါ) ထဲ မှာ နေနေတဲ့ လူတွေ ထဲ ဒီ သူကြီး နဲ့ ရန်မဖြစ်ဘူးသူ မရှိသလောက်ပါ။
သူကြီး ကို အနုနည်းရော၊ အကြမ်းနည်း နဲ့ပါ နည်းမျိုးစုံ ပညာခန်းမျိုးစုံ နဲ့ ဆဲ ပါတယ်။
အပြင်မှာ စကားပြောရင် ဒင်း ခမြာ သံခမောက် ဆောင်းနေရတော့မဲ့ အဖြစ်ပါ။
ဒီ အထဲ မှာ ဝင်ပြီး ဝေဖန်ချင်ရင် အရင် ဒီ ထဲ က စာတွေ၊ စကားတွေ အရင် ဖတ်ကြည့်ပါလား။
ဒါထက် – အကြောင်းတစ်ခု မှားတယ် မှန်တယ် ဆိုတာ ဘာပေတံ နဲ့ ဘယ်သူတွေက တိုင်းတယ် ဆိုတာကို အရင်သိဖို့ ပို အရေးကြီးသလားလို့။ :-)
.သဂျီး ဆိုတာကို အသက် တစ်ချောင်းထဲလို့များ ထင်နေကြသလားမသိ….
.ဟိုဖက်မှာ မရေးရဲလို့ ဒီပိုစ့်မှာပဲ ရေးလိုက်ဦးမယ်…..
.ကျုပ်ကတော့ သူငယ်ပြန်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့ မရှက်တတ်တော့ဖူး…..
.သူများနိုင်ငံတွေထဲက အထင်ကြီးစရာရှိတာတွေတွေ့ရင် အထင်ကြီးမိတာပဲ……
.ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက အထင်သေးစရာတွေတွေ့ရင်လဲ အထင်သေးမိတာပဲ…..
.တိုင်းပြည်အတွက်လဲ ဘာမှ ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီး ပေးဆပ်မနေဖူးပါဘူး……
.ဒီလိုပဲ စိတ်ကောင်းမွေး ၊ သန့်ရှင်းတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု့ပြုပြီး ကောင်းကောင်းနေရင်း အသက်ကြီးလာတာ….။
.မရှက်တတ်လို့ ရုတ်တရက်လဲ သေဦးမယ်မထင်သေးတာကြောင့် တရားမမှတ်ပဲ chess ထိုးရင်း အချိန်ဖြုန်းနေကြောင်း……
ကိုပါ ၊ ကိုပါ
အခု ထက်ထိ အကျွတ်တရားမရသေးပါလား။
ပက်ပုန်းသွားခိုင်း ဦးမှပါဘဲ။ :-)))))))))
ကိုယ်ချထားတဲ့ စည်းကမ်းကို ဖောက်တယ် မဖောက်ဘူးကိုပြောတာမဟုတ်ပါ။ Post မှာ ဖောက်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ ဒီတော့ ဖောက်တယ်လို့ assume ယူပါတယ်။ အဲဒီမှာမှ ပြသနာစပါတယ်။
ကိုယ်ချထားတဲ့ စည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်တာက ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်း
Site ထောင်ထားတာက ပိုင်ဆိုင်မှု ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်း
အဲဒီ နှစ်ခုကတန်ဖိုး ခြင်းမတူပါဘူး။ အဲဒီ နှစ်ခုကို တစ်ခုယူလို့တစ်ခုပေး သဘောတရားကတော့ မဖြစ်သင့်သလားလို့။
နောက်ခံအကြောင်းတရား လူ ဘာမှမပါပဲ post မှာရေးထားတာကို ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားမိတာပါ။
သူကြီး နဲ့ ရန်မဖြစ်ဘူးသူ မရှိသလောက်ပါ။
ဦးကိုကိုရေ..ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး မကြေနပ်ချက်တွေများနေတယ်ဆိုရင်တော့
ဆိုက် ထောင်ထားသူလည်း စည်းကမ်းမဖေါက်ရဆိုတဲု့
connection မကောင်းလိုို့ Comment ထပ်သွားတာပါ။ စည်းကမ်းဖောက်တယ်မဖောက်တာကို ပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘူးလေ။
မြန်မာလိုရေးထားတာပါ။ ဘိုလိုလဲ မရေးတတ်တော့ခက်သား။
(ကိုယ်ချထားတဲ့ စည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်တာက ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်း
အဲဒီ နှစ်ခုကတန်ဖိုး ခြင်းမတူပါဘူး။ )
နည်းနည်းလေးတောင် အမှန်နဲ့ မနီးစပ်ဘူးလား ဗျာ။